About Us - Jinbiao Dhismaha Qalabka Co., Ltd.
Hebei JINBIAO DHISMAHA MAADDOOYINKA Tech Corp., LTD.
Ujeedooyinka ugu waaweyn waa in ay bixiyaan macaamiisheena caalamka oo leh tayo wanaagsan, qiimaha tartan rasmi ah, gaarsiinta qanacsan iyo adeegyada aad u fiican. qancinta macaamiisha waa goolkii ugu muhiimsan. Waxaan kugu soo dhaweynayaa booqo macradka iyo xafiiska. Waxaan rajeynaynaa in aan sii adkayn la xiriira kula baayacmushtari.
Hebei Jinbiao Dhismaha Qalabka waxaa la aasaasay sanadkii 1986 ku takhasustay soo saarista qalab dhisme. Our warshad degan ka badan 800,000m2 deegaanka, iyadoo in ka badan 400 oo shaqaale ah, 40 ku takhasusay, caasimada diiwaan gashan ee RMB 60,4 milyan, oo gaarey 500 million yuan ee liquidity.In Shijiazhuang, 26 December 2014, shirkadda ayaa waxaa ku qoran sarrifka saamiyada, noqday shirkadda ugu horeysay degaanka ku qoran ee degaanka, wax soo saarka ayaa waxaa sidoo kale ka diiwaan gashan oo dahab mesh caadiga ah, kala ooday buuqa iyo brand nijaarnimo aluminium. In hore 90 ee, Jinbiao maray shahaado 2000 tayada ISO9001- ay ka mid yihiin "shahaadada tayada fasalka AAA", "gobolka Hebei shirkadaha aad u fiican", "ganacsi aaminsantahay", "wax soo saarka oo amaan ah" iyo koobab kale oo shahaado.
Hebei Jinbiao Dhismaha Qalabka Tech Corp., Ltd. ayaa ku hawlan in ay wax soo saarka iyo horumarinta fencings mesh silig, fiilooyin hotooyin iyo badeecadaha la xiriira ku salaysan in Anping, caanka Wire mesh Land ee Shiinaha.
Tayada wax soo saarka: waxyaabaha Our ayaa maray shahaadada ISO9001 nidaamka maareynta tayo leh, shahaado saarka CE, oo la aasaasay a iskaashiga mudada dheer ay la leedahay hay'adaha loomana baahno in Southeast Asia. Ka sokow JINBIAO dajisaa koox gaar ah kormeerka tayada si loo hubiyo in alaabta oo dhan si fiican u-qalma.
Capacity Production: Company JINBIAO leeyahay 3 dhirta wax soo saarka oo ay ku jiraan xayndaabka Wire mesh, Caqabadaha Sound iyo Aluminum nijaarnimo. Awoodda wax soo saarka Daily gaari karo 18km xayndaabka, 5000 caqabadaha dhawaaqa m2, iyo 8000 post steel kumbiyuutarada H. Nijaarnimo Aluminum loogu talagalay oo soo saaray in ka badan 10 nooc dhismayaasha bishiiba.
Jinbiao ku qalabeysan yahay in ka badan 80 nooc oo baaris saarka fasalka koowaad iyo R & D qalabka in ay soo saaraan post square bowd mesh silig, welded silig duudduuban mesh, bowd silsilad link, mesh silig digaag, ido / xoolaha / xayndaabka beerta, Maritime Bureau oo caqabad qaylada waayo dunida oo dhan macaamiisha.
Waxaan leenahay wax soo saarka heer oo dhamaystiran nidaamka tayada si loo hubiyo in alaabta oo tayo sare leh si loo daboolo baahida macaamiisha our '.
Shirkadda Our ayaa ku guuleystay sumcad wanaagsan ee Shiinaha, waxaana dhoofiyaan wax soo saarka dalalka iyo gobollada badan.
Waayo, baahida dayrka aad, fadlan hadda nala soo xiriir!
Company JINBIAO leeyahay 3 dhirta wax soo saarka oo ay ku jiraan xayndaabka Wire mesh, Caqabadaha Sound iyo Aluminum nijaarnimo. awoodda wax soo saarka Daily gaari karo 18km xayndaabka, 5000 caqabadaha dhawaaqa m2, iyo 8000 post steel kumbiyuutarada H. Nijaarnimo Aluminum loogu talagalay oo soo saaray in ka badan 10 nooc dhismayaasha bishiiba.
Shirkadda Our leedahay in ka badan 10 khadadka-soo-saarka, ay ka mid yihiin goynta, alxanka, foorarsiga iyo khadadka-soo-saarka iswada kale. In 2016 JINBIAO qaatay 20 million xaddi weyn oo lacag inay soo bandhigto qalab cusub oo waaweyn si loogu daweeyo buufiyo dusha sheyga.
waxyaabaha Our sidoo iibiso labada gudaha iyo dibaddaba leh tayo fiican oo qiimo wanaagsan. sida Russia, Singapore, Dubai, Maraykanka, Canada, Australia, Japan iwm ... Oo ayaa ku guuleystay qiimayn wanaagsan by macaamiisha oversea, riyaaqayaa sumcad sare in industry.
Hadafkayagu xigta waa in ka badan laga filayo ee macmiilka kasta by bixiya adeegga macaamiisha u fiican, dabacsanaan kordhay iyo qiimaha weyn. All oo dhan, iyada oo aan macaamiisheena aan jirin ha; oo aan macaamiisha ku faraxsan oo si buuxda ugu qanacsan, waxaan ku fashilmaan. Waxaan raadineynaa ah, markabka dejinta jumlada. Fadlan nala soo xiriir haddii aad xiiseynayaan waxyaabaha our. Rajaynaynaa in ay ganacsi sameeyaan idinla jirto kulligiin. tayo sare leh oo shixnad dhakhso!
Tan iyo markii ay aasaaska our, annagu waan xajinnaa hagaajinta badeecada iyo adeegga macaamiisha. Waan awoodnaa in aan ku siino tiro balaadhan oo ah waxyaabaha timaha tayo sare leh ee qiimaha tartan rasmi ah. Oo weliba waxaannu ku soo saari karaan waxyaabaha timaha kala duwan sida uu shay. Waxaan ku adkaysanayaan on tayo sare leh oo qiimo macquul ah. maahee, waxaan ku siin fiican adeeg OEM. Waxaan si diiran u soo dhaweyn amar OEM iyo macaamiisha adduunka oo dhan in ay iskaashi nala u tahay horumarka labada dhinac ee mustaqbalka.
Waqtigan xaadirka ah our network iibka waxaa had iyo goor sii kordhaya, hagaajinta tayada adeega si ay u buuxiyaan baahida macaamiisha ee. Haddii aad xiisaynayso in waxyaabaha kasta, fadlan nagala soo xiriir waqti kasta. Waxaan rajeynaynaa in aan la xirrira xiriirka ganacsi guul kula mustaqbalka dhow.
Waxaan bixinaa kala duwan ee weyn ee wax soo saarka ee arimahan. Ka sokow, amar kartoo sidoo kale waxaa laga heli karaa. Waa maxay more, aad ku raaxaysan doonaa adeegyo our aad u fiican. In eray keliya, aad ku qanacsan tahay waa la hubaa. Ku soo dhowow si ay u booqdaan Shirkadda! Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan kaalay oo na website.If wax su'aalo ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Degmada Bariga, Warshadaha Park, Anping County, Gobolka Hebei, Shiinaha (No. 27, Weier Road)
Si Dhamaystiran Loo Dhameystiray-Rongwu High-spe ...
Hoolka carwada cusub
Waxyaabaha aluminium ee Jinbiao
Chain link xayndaabka